Torohevitra roa fanampiny izay tsy hita tamin'i Seth tamin'ny fanadihadiana | Martech Zone
Alahady 15 Febroary 2009 Alahady, May 29, 2016 Douglas Karr
Nicki nisioka momba ny lahatsoratr'i Seth Godin: Torohevitra dimy hanaovana fanadihadiana. Heveriko fa tsy nahita toro-hevitra lehibe roa i Seth:
Azafady, azafady aza manadihady ny mpanjifanao raha tsy hoe vonona hanao zavatra amin'ny valiny ianao.
Faharoa, manoro hevitra aho ny fizotran'ny fanadihadiana rehetra manomboka amin'ny fanontaniana tokana, “Azonao amporisihina ve izahay?”
Araka ny nolazain'i Seth tao amin'ny lahatsorany, ny fametrahana fanontaniana iray dia matetika afaka manova ny valintenin'ilay olona amin'ireo fanontaniana manaraka. Manoro hevitra foana aho ny handefa an'ity fanontaniana tokana ity aloha - ary avy eo dia hamaly amin'ny fanadihadiana izay miresaka ny valiny.
Raha tianao, Mampiasà fitaovana fanadihadiana tsara izay mamela anao hametraka fanontaniana amin'ny sampana miorina amin'ny valiny - amin'ity fomba ity dia azonao atao ny mampihena ny valiny amin'ireo olana lehibe fa tsy mametraka fanontaniana an-taonina izay tsy misy lohahevitra.
Tags: seth godinfanadihadianafitaovana fanadihadiana
Antsoinay hoe Media, Medium tokoa izy io
15 Mey 2009 tamin'ny 3:45 hariva
Fanampiny lehibe amin'ny lisitra tsara!
15 Mey 2009 tamin'ny 4:17 hariva
Azoko ampiana ihany koa fa mila manazava amin'ny mpanjifa ny antony manokana momba ilay fanadihadiana izahay. (fahafaham-po ny mpanjifa, famaritana vokatra ho fanavaozana na vokatra vaovao, sns.). Ny mpanjifa dia mazàna mamaly amin'ny an-tsipiriany kokoa raha fantatr'izy ireo izay valiny tokony hampiasana.